लगातार बढिरहेको सुनको भाउमा पहिरो, आज तोलामै रु. ३४०० घट्यो
काठमाण्डौ । लगातार बढिरहेको सुनको भाउमा आज मंगलबार पहिरो गएको छ। गत तीन कारोबार दिनमा लगातार बढेको सुनको भाउ आज तोलामै ३ हजार ४०० रुपैयाँ घटेको हो। यो भारी गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन...
सुनको भाउ उकालो लाग्यो, चाँदीको पनि बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रमले मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। गत आइतबार बढेको सुनको भाउ सोमबार स्थिर रहँदै पुनः आज उकालो लागेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ। साताको...
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ आज तोलामा २०० रुपैयाँको गिरावट आएको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। दसैँ बिदापछि हिजो बिहीबारबाट सुनको कारोबार खुलेको थियो। हिजो पनि सुनको...
आजबाट सुन कारोबार खुल्यो, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । दसैँपछि कारोबार खुलेको सुनको भाउ आज बिहीबार ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ आज तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत कात्तिक ६ गते प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी...